हराएको फोन कसरि पत्ता लगाउने ? - जनदिशा
हराएको फोन कसरि पत्ता लगाउने ?
Dipak Bhusal March 7, 2020	No Comments
स्मार्टफोन अहिले हामि सबै चलाउछौ अझ भन्नुपर्दा हाम्रो जीवन को एक महत्यपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। यदि स्मार्टफोन कुनै कारण हरायो भने सबैभन्दा ठूलो खतरा तपाईको फोनमा भएको डाटाहरु अरुले दुरुपयोग गरिदेला भन्ने हुन्छ । केही सेटिङ मिलाएमा तपाईं आफ्नो हराएको वा चोरी भएको स्मार्टफोनको लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, साथै फोन मा भएका सबै डाटा मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाई एन्ड्रोइड चलाउनु हुन्छ भने एन्ड्रोइडमा एक बिल्ट इन ट्र्याकिङ फिचर हुन्छ । यसलाई प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो फोनको लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि google.com/android/devicemanager मा जानुहोस् र आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्नुहाेस् । तपाईं जुन गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्नुहुन्छ, त्यो एकाउन्टसँग जोडिएका सबै एन्ड्रोइड डिभाइसको लोकेसन गुगल म्यापको सहायताले हेर्न सकिन्छ ।
यहाँबाट तपाईंले आफ्नो फोनमा घन्टी बजाउन पनि सक्नुहुन्छ । एउटा यस्तो अप्सन छ, जसबाट तपाईं आफ्नो फोनमा भएको सबै डाटा मेटाउन सक्नुहुन्छ साथै मोबाइल लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
आइफोनका लागि बिल्ट–इन एन्टीथेफ्ट एपको सुविधा छ, जुन सबै एप्पल आइओएस डिभाइसका लागि उपयोगी छ । यो एपको नाम फाइन्ड माई फोन हो । यसले तपाईंको आइक्लाउड एकाउन्टको माध्यमबाट काम गर्छ ।
icloud.com मा गएर तपाईं आफ्नो फोनको लोकेसन पत्ता लगाउन, फोनमा मेसेज पठाउन, फोन लक गर्न र डाटा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि तपाईंले आफ्नो मोबाइलको लोकेसन सर्भिस इनेबल गरेको हुनुपर्छ । यदि तपाईं यो फिचर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने थर्ड पार्टी एप पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३३ सय ८७ पुग्यो, कुन देशमा कति ?
Next Next post: फेसबुकको घोषणा : मेडिकल मास्क बिक्रीको विज्ञापनमा प्रतिवन्ध